ရေချိုးခန်း ထဲက ပုံစံလေး နဲ့ ကြွေလောက် စရာကောင်းလွန်း တဲ့ ပုံတွေ တင်ပေး လိုက် တဲ့ နန်းမွေစံ – Shwe Sar
ရေချိုးခန်း ထဲက ပုံစံလေး နဲ့ ကြွေလောက် စရာကောင်းလွန်း တဲ့ ပုံတွေ တင်ပေး လိုက် တဲ့ နန်းမွေစံ
မော်ဒယ်လ်နန်းမွေစံ ကတော့ လက်ရှိမှာ အောင်မြင်လျက်ရှိနေတဲ့ မော်ဒယ်လ်တွေ ထဲမှာ တစ်ယောက် အပါအဝင်ဖြစ်ပြီး အနုပညာ အလုပ်တွေကို လုပ်ကိုင်လျက်ရှိနေကာ ကြော်ြ ငာေ တွ ကိုလည်း ရိုက်ကူးလျ က်ရှိေ နသူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အမိုက်စားဖက်ရှင်လေးတွေကို ဝတ်ဆင်လေ့ရှိတဲ့ သူမကတော့ မိန်းကလေး ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင် အားပေးမှုရော ယော ကျာ်းေ လးပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင် အားပေးမှု ကိုပါ အခိုင်အမာ ရယူထားနိုင်ခဲ့တဲ့ မော်ဒယ်လ် တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးတွေ ကို လူ မှုကွန် ယက် စာမျက်နှာထက် တင်ပေးလေ့ ရှိတဲ့ သူမကတော့ ပရိသတ်တွေ ရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုကို အခိုင်အမာရယူထားနိုင်သူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အ မိုက်စားခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းအလှကို ပိုင်ဆိုင်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့ သူမကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော်လေးဆို ရင်လည်း မမှားပါဘူး။ သူမကတော့ ယခုမှာ အလန်းစား ဖက်ရှ င်ေ လးကြောင့် ဆွဲဆောင်မှု ရှိတဲ့ အလှတရားလေး ပေါ်လွင်နေပြီး အမိုက်စားပိုစ့်လေးတွေပေးနေခဲ့ပါတယ်။
သူမကတော့ “မွေစံချစ်တဲ့ ကိုကိုတို့ရေ😘😘😘 မွေစံရဲ့ tiktok video တွေ ပုံတွေကို ကြိုက်ကြရဲ့လား. . မွေစံကတော့ အခုတလော နာမည်အရမ်းကြီးနေတဲ့ #5BB internet ကိုသုံးထားတာပါနော် . .ချစ်ရတဲ့ Fan” ဆိုပြီး အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးတွေနဲ့အတူ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာထက်မှာ ရေးသား ထားခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ အသည်းယားစရာ ပုံစံေ လးနဲ့ လှပနေတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေ ဟာ ပရိသတ်တွေကို အချစ်တွေပိုစေခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် မော်ဒယ်လ်နန်းမွေစံရဲ့ အမိုက်စားပုံစံလေးနဲ့ ကြွေလောက် စရာေ ကာင်းလွန်းတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပြီး အဆိုပါ ပုံရိပ်လေးတွေကို အောက်မှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
မျောဒယျလျနနျးမှစေံ ကတော့ လကျရှိမှာ အောငျမွငျလကျြရှိနတေဲ့ မျောဒယျလျတှေ ထဲမှာ တဈယောကျ အပါအဝငျဖွဈပွီး အနုပညာ အလုပျတှကေို လုပျကိုငျလကျြရှိနကော ကွျောငွာတှေ ကိုလညျး ရိုကျကူးလကျြရှိနသေူလေးပဲ ဖွဈပါတယျ။ အမိုကျစားဖကျရှငျလေးတှကေို ဝတျဆငျလရှေိ့တဲ့ သူမကတော့ မိနျးကလေး ပရိသတျတှရေဲ့ ခဈြခငျ အားပေး မှု ရော ယောကျြားလေးပရိသတျတှရေဲ့ ခဈြခငျ အားပေးမှု ကိုပါ အခိုငျအမာ ရယူထားနိုငျခဲ့တဲ့ မျောဒယျလျ တဈယောကျပဲ ဖွဈပါတယျ။
အမိုကျစား ပုံရိပျလေးတှေ ကို လူမှုကှနျ ယကျ စာမကျြနှာထကျ တငျပေးလေ့ ရှိတဲ့ သူမကတော့ ပရိသတျတှေ ရဲ့ ခဈြခငျအားပေးမှုကို အခိုငျအမာရယူထားနိုငျသူလေးပဲ ဖွဈ ပါ တယျ။ အမိုကျစားခန်ဓာကိုယျကောကျကွောငျးအလှကို ပိုငျဆိုငျထားနိုငျခဲ့တဲ့ သူမကတော့ ပရိသတျတှရေဲ့ အခဈြတျောလေးဆို ရငျလညျး မမှားပါဘူး။ သူမကတော့ ယခုမှာ အလ နျးစား ဖကျရှငျလေးကွောငျ့ ဆှဲဆောငျမှု ရှိတဲ့ အလှတရားလေး ပျေါလှငျနပွေီး အမိုကျစားပိုဈ့လေးတှပေေးနခေဲ့ပါတယျ။
သူမကတော့ “မှစေံခဈြတဲ့ ကိုကိုတို့ရေ😘😘😘 မှစေံရဲ့ tiktok video တှေ ပုံတှကေို ကွိုကျကွရဲ့လား. . မှစေံကတော့ အခုတလော နာမညျအရမျးကွီးနတေဲ့ #5BB internet ကိုသုံးထားတာပါနျော . .ခဈြရတဲ့ Fan” ဆိုပွီး အမိုကျစား ပုံရိပျလေးတှနေဲ့အတူ လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာထကျမှာ ရေးသား ထားခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ သူမရဲ့ အသညျးယားစရာ ပုံစံလေးနဲ့ လှပနတေဲ့ ပုံရိပျလေးတှေ ဟာ ပရိသတျတှကေို အခဈြတှပေိုစခေဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ခဈြပရိသတျတှအေတှကျ မျောဒယျလျနနျးမှစေံရဲ့ အမိုကျစားပုံစံလေးနဲ့ ကွှလေောကျ စရာကောငျးလှနျးတဲ့ ပုံရိပျလေးတှကေို ပွနျလညျဖျောပွပေးလိုကျပွီး အဆိုပါ ပုံရိပျလေးတှကေို အောကျမှာ ကွညျ့နိုငျပါတယျ။
Previous post မြန်မာပြည် အနေနဲ့ ကိုဗစ်ဆူနာမီ လှိုင်းလုံးကြီးကို ရင်ဆိုင်နေရပြီ ဟု ပညာရှင်များ ပြောကြား
Next post အရမ်းလှတဲ့ ပုံလေးတွေနဲ့ ညို့အားပြင်းပြင်း ဆွဲဆောင်လိ်ုက်တဲ့ အိချောပို